တိရစ္ဆာန်များ၏ အပြု အမူ များကို ကြည့် ၍ ရာသီဥတုအခြေအနေခန့််မှန်းခြင်း | Buzzy
တိရစ္ဆာန်များ၏ အပြု အမူ များကို ကြည့် ၍ ရာသီဥတုအခြေအနေခန့််မှန်းခြင်း
လူအများက ငှက်တွေ ၊အခြားသတ္တ၀ါတွေကို ကြည့်ပြီး လေတိုက်မည်၊မိုးရွာမည်ဟု ခန့်မှန်း....
Birds Evacuate Before Major Storms
ငှက်များဟာ မုန်တိုင်းကို အနည်းနှင့်အများ ခြေရာခံနိုင်တယ်လိုိ့ လူအချို. ကယုံကြည်ကြပါတယ်။မုန်တိုင်းမစတင်မီမှာ ငှက်အများစုဟာ ကောင်းကင် သို့ မပျံသန်းကြတော့ပဲ မြေနာသို့ ပုန်းခိုရန် နေလေ့ ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ငှက်များ သည် ရာသီဥတု ဆိုးရွားမည်ဆိုပါက ကြို တင်၍ မိမိနေရပ်သို့ ပျံသန်းလေ့ရှိတယ်လို့ လည်းသိရသည်။ သိပ္ပ ပညာရှင်များ လေ့လာမှု အရ ငှက် အုပ်စု ဟာ မုန်တိုင်းမလာ ခင် တစ်ရက် လောက်အလို မှာ နေရပ်သို့ ပျံသန်းသွားတတ်ကြကြောင်းပြောပြထားသည်။
ငှကျမြားဟာ မုနျတိုငျးကို အနညျးနှငျ့အမြား ခွရောခံနိုငျတယျလို့ လူအခြို. ကယုံကွညျကွပါတယျ။မုနျတိုငျးမစတငျမီမှာ ငှကျအမြားစုဟာ ကောငျးကငျ သို့ မပြံသနျးကွတော့ပဲ မွနောသို့ ပုနျးခိုရနျ နလေေ့ ရှိတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ငှကျမြား သညျ ရာသီဥတု ဆိုးရှားမညျဆိုပါက ကွို တငျ၍ မိမိနရေပျသို့ ပြံသနျးလရှေိ့တယျလို့ လညျးသိရသညျ။ သိပ်ပ ပညာရှငျမြား လလေ့ာမှု အရ ငှကျ အုပျစု ဟာ မုနျတိုငျးမလာ ခငျ တဈရကျ လောကျအလို မှာ နရေပျသို့ ပြံသနျးသှားတတျကွကွောငျးပွောပွထားသညျ။
မြွေတွေရဲ. ထူးဆန်းတဲ့ အပြု အမှု များကို တွေ. ရှိရပါက မြေငလျင်ဖြစ်ပွားနိုင်ကြောင်းကို ပြသနေခြင်းဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။မြွေများသည် မြေပေါ်နှင့် မြေကြွင်းများထဲတွင်နေထိုင်သည့်အတွက် ငလျှင်၏ လက္ခဏာကို အလျင်ဆုံး တွေ့ ထိကြ ရသည့် သတ္တ၀ါများဖြစ်သည်။သို့ ဖြစ်၍ မြွေများ၏ အပြု အမူ များကို သတိထားကြည့်မည်ဆိုပါက မြေငလျင်ရဲ. ဘေးကို ကြို တင်မှန်းဆနိုင်ကြောင်းသိရသည်။
မွှတှေရေဲ. ထူးဆနျးတဲ့ အပွု အမှု မြားကို တှေ. ရှိရပါက မွငေလငျြဖွဈပှားနိုငျကွောငျးကို ပွသနခွေငျးဖွဈသညျဟု သိရသညျ။မွှမြေားသညျ မွပေျေါနှငျ့ မွကွှေငျးမြားထဲတှငျနထေိုငျသညျ့အတှကျ ငလြှငျ၏ လက်ခဏာကို အလငျြဆုံး တှေ့ ထိကွ ရသညျ့ သတ်တဝါမြားဖွဈသညျ။သို့ ဖွဈ၍ မွှမြေား၏ အပွု အမူ မြားကို သတိထားကွညျ့မညျဆိုပါက မွငေလငျြရဲ. ဘေးကို ကွို တငျမှနျးဆနိုငျကွောငျးသိရသညျ။
သိုးအများစုဟာ နှင်းကျခြင်း ၊ မိုးရွာခြင်းများကဲ့သို့ သော ရာသီဥတုအခြေအနေဖြစ်ပေါ်မလာခင် ကြို တင်၍ နေရာပြင်ဆင်တတ်ကြကြောင်းသိရသည်။ယခုကဲ့သို့ သော သို့ များ၏ အပြု အမူများကိုကြည့်၍ ရာသီဥတု အခြေအနေခန့် မှန်းခြင်းကို လယ်သမားများမှ စတင်သိရှိခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်သည်။
သိုးအမြားစုဟာ နှငျးကခြွငျး ၊ မိုးရှာခွငျးမြားကဲ့သို့ သော ရာသီဥတုအခွအေနဖွေဈပျေါမလာခငျ ကွို တငျ၍ နရောပွငျဆငျတတျကွကွောငျးသိရသညျ။ယခုကဲ့သို့ သော သို့ မြား၏ အပွု အမူမြားကိုကွညျ့၍ ရာသီဥတု အခွအေနခေနျ့ မှနျးခွငျးကို လယျသမားမြားမှ စတငျသိရှိခဲ့ခွငျးလညျးဖွဈသညျ။
၀ံပုလွေများဟာ မုန်တိုင်းလာမည်ဆိုပါက ထူးခြား ကျယ်လောင်စွာ အော်မြည်တတ်ကြောင်းသိရသည်။ ထိုသို့ ပြု လုပ်ချင်းမှာ အခြားသော သတ္တ၀ါများကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများပြု လုပ်ရန်အတွက် အချက်ပေးခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်သည်။တောတောင်များထူထပ်သည့် ဒေသတွင်နေထိုင်သူများသာ ၀ံပုလွေများအကြောင်းကို ကောင်းစွာနားလည်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။၀ံပုလွေအော်မြည်ခြင်းသည် အခြားသော အဓိပ္ပါယ်များလည်းရှိနိုင်ပေသည်။
ဝံပုလှမြေားဟာ မုနျတိုငျးလာမညျဆိုပါက ကယျြလောငျစှာ အျောမွညျတတျကွောငျးသိရသညျ။ ထိုသို့ ပွု လုပျခငျြးမှာ အခွားသော သတ်တဝါမြားကို ကွိုတငျပွငျဆငျမှုမြားပွု လုပျရနျအတှကျ အခကျြပေးခွငျးလညျးဖွဈနိုငျသညျ။တောတောငျမြားထူထပျသညျ့ ဒသေတှငျနထေိုငျသူမြားသာ ဝံပုလှမြေားအကွောငျးကို ကောငျးစှာနားလညျနိုငျမညျဖွဈသညျ။ဝံပုလှအေျောမွညျခွငျးသညျ အခွားသော အဓိပ်ါပယျမြားလညျးရှိနိုငျပသေညျ။
When rain's a-comin', frogs get a-courtin'. That's why they croak so much more
ဖားတွေဟာ မိုးရွာမည်ကို ကြို တင်သိကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ဖားတွေဟာ မိုးရွာ တော့ မည်ဆိုလျှင် မျိုး ပွားဖို့ အတွက် ကြို တင် မိတ်လိုက်တတ်ကြကြောင်းသိရသည်။ ထိုသို့ ပြု လုပ်ကြခြင်းမှာ မိုးရွာ နေချိန်တွင် ဥ မည်ဆိုပါက ပေါက်ဖွားနိုင်သည့် ဖားများ ရှင်သန်နိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ထို့ ကြောင့် ဖားများ မိတ်လိုက် နေပါက မိုးရွာနိုင်ကြောင်းသုံးသပ်ကြသည်။
ဖားတှဟော မိုးရှာမညျကို ကွို တငျသိကွတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ဖားတှဟော မိုးရှာ တော့ မညျဆိုလြှငျ မြိုး ပှားဖို့ အတှကျ ကွို တငျ မိတျလိုကျတတျကွကွောငျးသိရသညျ။ ထိုသို့ ပွု လုပျကွခွငျးမှာ မိုးရှာ နခြေိနျတှငျ ဥ မညျဆိုပါက ပေါကျဖှားနိုငျသညျ့ ဖားမြား ရှငျသနျနိုငျခွငျးကွောငျ့ဖွဈသညျ။ထို့ ကွောငျ့ ဖားမြား မိတျလိုကျ နပေါက မိုးရှာနိုငျကွောငျးသုံးသပျကွသညျ။
Cows Lie Down in the Pasture Before Rain
နွားများဟာ မိုးရွာမည်ဆိုပါက စားကျက်တွင် အစာ မစာ ပဲ အိပ်နေလေ့ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။နေပူနေတဲ့ အချိန် မှာ နွားများ ဟာ မြူးနေခြင်းမရှိပါဘူး။ မိုးရွာ မည့် ရာသီဥ တုကို တွေ့ ရှိမှ ပျော်ရွှင်ပြီး စားကျက်မှာ အိပ်နေလေ့ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ နွားအိပ်လျှင်မိုးပုံမှန် ရွာ မရွာ ဆိုခြင်းကို လယ်သမားများ သာလျှင် သိမည်ဖြစ်သည်။
နှားမြားဟာ မိုးရှာမညျဆိုပါက စားကကျြတှငျ အစာ မစာ ပဲ အိပျနလေရှေိ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ။နပေူနတေဲ့ အခြိနျ မှာ နှားမြား ဟာ မွူးနခွေငျးမရှိပါဘူး။ မိုးရှာ မညျ့ ရာသီဥ တုကို တှေ့ ရှိမှ ပြျောရှငျပွီး စားကကျြမှာ အိပျနလေရှေိ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ။ဒါပမေဲ့ နှားအိပျလြှငျမိုးပုံမှနျ ရှာ မရှာ ဆိုခွငျးကို လယျသမားမြား သာလြှငျ သိမညျဖွဈသညျ။